Sheeko Cusub : Real Madrid Oo Wadahadallo Hor Dhac Kula Jirta Mohamed Salah – Wararka Ciyaaraha Maanta
Sheeko Cusub : Real Madrid Oo Wadahadallo Hor Dhac Kula Jirta Mohamed Salah
May 16, 2019 kooxda La Liga, Wararka Maanta 1
Wariye ka tirsan taleefishinka Canal+ ee France ayaa daboolka ka qaaday in ay jiraan wadahadallo hor dhac ah oo u socda Real Madrid iyo Mohamed Salah .
Garabkas Liverpool ayaa xagaagii hore lala xariiriyay in uu u wareegayo horyaalka Spain gaar ahaan Barcelona iyo Real Madrid.
Salah ayaa Liverpool u yimid xagaagii 2017-ka waxa uuna xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay u dhaliyay kooxdaas 44 gool dhamaan tartamada ay ku jiraan .
Wiilka reer Masar ayaa sii joogteeyay heer ciyaareedkiisa wacan waxa uuna xilli ciyaareedkiisa labaad dhaliyay 26 gool waxa uuna laba jeer si xigta uu ku guuleystay gool dhaliyaha horyaalka Ingiriiska oo ah xili ciyaareedkaan iyo midkii hore .
Inkastoo Salah uu Liverpool kula jiro hishiis gaaraya illaa iyo xagaaga 2023-ka hadana waxaa jira warar sheegaya in uu baxayo maadaama aysan isku wacneyn tababare klopp inkastoo arintaas uu beeniyay macalinka .
Wariye Philippe Carayon oo ka tisran Canal+ ayaa sii xoojiyay tuhunka mustaqbalka Salah waxa uuna sheegay in wadahadallo hor dhac ah ay u socdaan Real iyo lacibka
Waxa uu sheegay wariyaahas in Real doonayaan in ay dhisaan qad xooggan oo weerarka ah iyaga oo ku kulminaya Hazard oo haatan la tibaaxayo in hishiiskiisa ay dhan u rideen , Gareth Bale iyo Mohamed Salah
Mucaad jelle jr says:
Waa saxix fican hadayba yelayso real Madrid lacibkeda LIVERPOOL iso sheeko cusub waaye wllhi